Akhriso: Wararkii ugu dambeeyay doorashada Maamulka Koofur Galbeed – Bandhiga
Akhriso: Wararkii ugu dambeeyay doorashada Maamulka Koofur Galbeed
Xili dhawaan la filayo in shahaadooyinka Musharaxnimo la siiyo musharixiinta u taagan xilka maamulka Koofur Galbeed ee dhiman ayaa waxaa dhanka kale socda wadahadalo ku aadan sidii doorashada u qabsoomi laheyd waqtigii loogu talagalay.
Sidoo kale Mukhtaar Roobow oo u tartamaya xilka madaxtinimo ee Koofur Galbeed Soomaaliya ayaa ku sugan magaalada Muqdisho waxaana uu kulan la qaatay saraakiisha hay’adaha Qaramada Midoobay iyo qaar kamid ah safiirada dalalka Soomaaliya xeriirka la leh.
Dhanka kale Musharaxiinta la baxay isbadal doonka ee u tartamaya xilka madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed Saoomaaliya ayaa xalay waxa ay kulmayo la qaateyn sii hayaha Madaxweynaha Koonfur Galbeed ahna gudoomiyaha Baarlamaanka maamulkaasi C/qaadir Shariif Sheekunaa Maye.
Musharaxiinta isbedel doonka ah waa musharixiinta aysan kamid ahayn shakhsiyaadka loo xaglinayo in ay taageereyso dowladda Soomaaliya waxaana kulanka looga wada hadlay sida ugu haboon ay doorashada u dhaceyso.
Waxa kale oo ay isla soo qaadeen inta uu kulankooda socday oo ay si gaar ah isaga xog wareysteen sida ay lagamamaarmaan u tahay in isbedel uu ku dhaco maamulka Koonfur Galbeed.